Miara-dalana ny politika, ny toekarena, ny sosialy… | NewsMada
Miara-dalana ny politika, ny toekarena, ny sosialy…
Olana toekarena tsy misy vahaolana ny olana politika, raha ny fijerin’ny mpandinika sasany. Olana sosialy tsy misy vahaolana kosa ny olana toekarena? Koa raha te hamaha ny olana toekarena ny firenena iray, mila mamaha ny olana sosialy aloha. Rehefa mivaha ny olana toekarena, milamina ho azy ny politika?
Amin’izao fialana miandalana amin’ny fihibohana noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, mila jerena maika sy akaiky hatrany ny lafiny sosialy? Ny fiainam-bahoaka eny ifotony izany; eny, na zava-dehibe sy mahamaika aza ny fanarenana ny toekarena. Mbola mafy sy sarotra ho an’ny maro ny fiatrehana ny fiainana.
Ahoana, ohatra, ny hahazoany miatrika sy manarina tsikelikely indray ny fiainany andavanandro mandavantaona? Tsy ho enta-mavesatra ho an’ny fanjakana, indrindra amin’ny fanarenana ny toekarena sy ny fandaminana politika. Tsy hisian’ny korontana sosialy izany, indrindra ahazoana miatrika ny asa fampandrosoana.
Ekena, eo ny karazana fanampiana: mila tohizina, mbola andraindrain’ny maro tsy maharin-tena irery amin’izao. Saingy, tsy mahasehaka ny rehetra, tsy hahafa-po rahoviana, tsy maharitra… Raha ny marina, ahoana ny hahazoan’ny tsirairay mandray anjara amin’ny fanarenana toekarena? Na miainga amin’ny tenany aza aloha.
Anisan’izany, ohatra, ny fitanana sy ny fampitomboana ny asa efa misy, ny famoronana asa, ny fanamorana ny fisamboram-bola hahazoana manangana orinasa sy mamorona asa… Efa misy izany rehetra izany, saingy mila ampitomboana, azo antoka, mahomby, mitera-bokatra kokoa… aorian’izao krizy ara-pahasalamana izao.
Matoa mbola misy ny fitarainana etsy sy eroa, misy tsy milamina ao. Rahoviana tsy hiteny ny olona… tsy afa-po na oviana? Na izany aza, mila tsinjovina ny fiainam-bahoaka tsy hisian’ny korontana sosialy. Mila mandeha na miara-dalana amin’izany ny fanarenana toekarena sy ny fandaminana politika? Mifameno fa tsy mifamono…